Chii chinoitika kana musingadi kubhadhara chikwereti kubhengi? How kudzivisa basa?
Dzimwe nguva pane mamiriro ezvinhu apo munhu anoita panze chikwereti kubva kupfungwa zvemari, uye mune matambudziko aro achauya nematsive. Panyaya iyi, mubvunzo unomuka, chii chichaitika kana musingadi kubhadhara chikwereti kubhengi.
Maererano nenhamba, vatengi vakawanda vakasarudza kubhadhara chikwereti kuramba vagari solvent. Anokwereta chete abve zvavanosungirwa kuti vaite. Uye nokuda kuti, pane zvakawanda zvikonzero. Vamwe vanhu havadi kupa mari yavo, nepo vamwe vanodavira kuti munhu akakweretesa zvinoda refu mwero kufarira, etc.
Asi yeuka: kana munhu "akarembera" chikwereti, anofanira kuchiripa izvozvo. Kunyange zvazvo iye asina kutya nengozi uye zvipingamupinyi, tinogona kuramba nehanya womunhu anomukweretesa uye uone zvinoitika kana musingadi kubhadhara chikwereti kubhengi.
Chii chikamu haizogadzirisiki?
Chero chikwereti Chimiro pane pfungwa "chikamu haizogadzirisiki." Nemamwe mashoko, munhu akakweretesa anoratidza wakaiswa zvazvingava anofukidza mari zvose nokuda processing kuti chikwereti kuti mukwereti anofanira kuripa. Shoma chikumbaridzo chinoratidza ndiyo 3% of chikwereti.
Achiri kufanira haana kubhadhara chikwereti, sezvo akakweretesa haadi kupa sezvinoita kuti vane mari. The sangano achatora matanho zvose kudzikinurwa zvayo, ipapo anokwereta achanzwisisa chii chichaitika kana musingadi kubhadhara chikwereti kubhengi. Chokutanga, mari tsika mushandi achaita zvakanaka uye mudane bvunzurudzo. Panguva iyoyo achazivisa chitsama chikwereti, uye tsvaka zvikonzero vasiri muripo. Pakukurukura ichi, mukwereti anogona kunzwa yaizivikanwa okuti: "Ndinoyeuka pamusoro chikwereti changu, asi zvino ini handigoni abhadhare, nekuti hapana mari kubhadhara chikwereti." Zvokuita mumamiriro ezvinhu aya, kuitira kuti kuuya nyaya kumatare? Unogona vanobvumirana kuti vhiki shomanana mari achatsiviwa, asi haumanikidzwi kuva huma kumbira kwemwedzi kudzorera chikwereti. Vamwe anokwereta nokuda zvivimbiso anogona nonotsa muripo chaizvo kwenguva refu. Zvisinei, zano rakadaro asingapikiri kuitwa pane imwe huru pamahombekombe, uye kubhadhara nenguva.
Chii chinoitika kana musingadi kubhadhara chikwereti kubhengi uye mushure nguva yakapikirwa?
Panyaya iyi, pemahombekombe resell chikwereti pokuunganidzira makambani kuti vakarova avo ngava. Chinangwa chavo - kuwana mari shure chero zvodini, saka ivo vachaomesera mutengi nechinhu pamutemo nzira. Zuva nezuva, vashandi haazorambi chete kudana paserura yake, asi kuuya kumba uye vanoda kudzoka zvikwereti. Hazvina zvakafanira kuvanda, sezvo vateresi anogona kutanga kudana vaunoda uye kutyisidzira. Vanogona tyisa, achiti kana musingadi kubhadhara chikwereti, enda kujeri kwenguva refu. Vateresi achaita zvose kuitira kuti hamucharambi kurara murugare. Ivo achapfuura nyaya kudare, uye uchaenda kune bailiffs. Unogona, Chokwadi, kuvanza uye regai kuzarura musuo, asi chokwadi chiri kurutivi rwavo, uye iwe chete yatyora chibvumirano chibvumirano uye vanofanira kurangwa.
yakavanda Possible matatu uye kumirira kupedza mutemo zvausingakwanisi, asi kuti chikwereti iwe hahuzombobudiriri.
Lombard: Chii ichi?
Cession (basa) mu anomukweretesa
Atore chikwereti nezvakaipa chikwereti nhoroondo - kwakaoma, asi zviri zvechokwadi!
Clearance. Credit Card pasina basa wegore
The Kuongorora chikwereti Portfolio. Chikwereti Portfolio - iri ...
Cartoons anenge imbwa: mazita akanakisisa
"Stop kuvava" (kuturika kuti katsi): tsananguro, akafanana, mirayiridzo kushandiswa uye zvaunofunga
PC yaunonyanya kushandisa pamwe Android munzira dzakawanda
French rechiito Cosa Fare: conjugation kuti tya uye manzwiro
Where kusangana muMoscow murume uye sei kuita izvozvo?
Where anoita ane eskimo? Nharaunda kugarwa uye Eskimos dzokugara
Delivery webasa DPD: inofambiswa
Mafuta dzvuku caviar zvakakodzera norukosoro hakuiti kuwedzera mamwe kilos
The the dzisina "Manzherok": wongororo uye mapikicha
Mitemo muviri mishonga pashure ruoko kutsemuka
Taka Connor vakanga nyaya yacho mutambi
A zvigadzirwa zvitsva kuti vatendeuki yomugungwa kupinda potable panyaya kwemaminitsi